7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa Soomaliya
Posted on 09 / 12 / 2018 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery. Waxay leedahay 50 Comments.
Qaabka qaabdhismeedka dhismuhu wuxuu leeyahay laba isdulqaade: S iyo R. labaduba waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan maskaxda sida niyad jabka. Hase yeeshee, R-isomer waa mid xooggan, tan iyo marka la barbardhigo S-foomka, waxaa intaa dheer inuu saameeyaa shaqooyinka sida xusuusta iyo hadalka. Waxay kicisaa xidhiidhada neeriga ee maskaxda, waxay sare u qaadaa soo saarista RNA, waxay bixisaa dhiigga ugu fiican. Waxa kale oo jira nooc saddexaad oo ah phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Waa isku-dhafka rasmiga ah ee labada isqaba, kuwaas oo isku daraya hantidooda. Waqtiga xaadirka ah, R-isomer-ka ah ee daroogada lagama heli karo iibka. Sidaa darteed, taxaddar haddii aad soo iibsato phenylpyricetam waxay yeelan doontaa saameyn daciif ah. Haddii qiyaasta daawadu ku filan tahay, ka dibna laga yaabo inay taasi tahay S-foomka ka mid ah xarunta. Alaabooyinkeena waxaa ku jira foomka SR-ga, waxayna leeyihiin dhamaan faa'iidooyinka daroogada.
Waxaa laga yaabaa, phenylpyracetam waxaa lagu magacaabi karaa mid ka mid ah dawooyinka ugu liita ee aanotropic ee waqtigeena. Waxaa loo sameeyey si sax ah saameyn xooggan oo ku saabsan cudurada halista ah ee la xiriira dhibaatooyinka xusuusta, hadalka, ama isuduwidda dhaqdhaqaaqa. Phenylpyracetam marar badan ayaa loo rogaa qaaciddada, oo loo yaqaan 'Union pyracetam' oo loo yaqaan 'pyracetam.' Qaybta fenyl ayaa waxay ka qayb qaadatay daawada farmasokokinetiga (tusaale ahaan, xitaa in badan oo lagu garto xannuunka dhiig-maskaxda), taasoo ka dhigaysa mid awood leh oo degdeg ah.
Budada Phenylpiracetam - Dhibaatooyinka iyo iska horimaadyada
Waxaan aaminsanahay in aan loo eegin sida laguu sheego in "daroogadu ay gebi ahaanba amaan tahay," kuma talineyno isticmaalka in ka badan toddobaadka 3, sidoo kale aad ayuu ku daalay sababtoo ah neurotransmitters oo ka shaqeynaya xawaare sare. Xaqiiq ahaan, feker ahaan, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo jimicsi dhacdo, ama koorsooyin toddobaadyo ah 2-3 oo u daawee sidii "Turbo Mode".
Waxaa lagu tijaabiyey in miisaanka qofku uu door muhiim ah ka ciyaarayo haddii aad ka yar tahay 70 kg: 1 kiniin (100 mg) subax kasta, haddii aysan jirin wax saameyn ah, ka dibna ku dar mid kale, ama isku mar, ama saacadaha 2-3 .
1. Saacadaha 5-6. Noocyo waa dhalaal, tamar, diirad saarid. Ma jiraan wax dabaal ah, waxaad dareemi doontaa inaad soo aruuriso oo aad go'aamiso, laakiin waad fahmi doontaa tan kaliya marka saameynta dawada ay dhammaato. Waqtiga u dhexeeya "fikir-ka-qabashada" ayaa si muuqata u soo gaabinaysa, isla markaasna waxaa ugu fiican inaadan qalad sameyn. Hadalku wuxuu noqonayaa mid deg deg ah, waxaan rabaa in aan ka hadlo wax walba, laakiin haddii aysan jirin dhego dheeraad ah, ka dibna akhri, qor, barnaamij, dhammaadka. Waxyaabo kale oo aad u xiiso badan - Waxaan rabaa in qof walbaa si dhakhso ah loola hadlo ama aad buug u akhrido si dhakhso ah oo aad u cuntid ereyo. Ciyaaraha ayaa sidoo kale ku faraxsan.
2. 10-14 maalmaha gudahood. Xasuusta iyo qosolka waxoogaa yar ayaa la hagaajiyaa, sida kiiskani waa maqaarka caadiga ah. Aragtida FullHD waxaa laga saaraa, sidaa darteed waxaad ku tababaran kartaa "riyooyin hanuunsan".
Ka dib daqiiqadaha 20-60, waxay kuxirantahay dheef-shiid kiimikaad (metabolism). Saameynta Nootropic - ka dib maalmaha 10-14.
Waa warqad aad u macquul ah. Waxaan u imid inaan ogaado waxyaabaha ku saabsan boomaatada miisaanka luminta online.
Ma rumaysan karo dhammaan isbeddellada jirkaagu uu ku marayo adoo qaadanaya budada Carphedon. "Riyooyin la hagayey" ayaa si gaar ah u xiiso leh dhammaan saameynta ku taal Nootropics. Waxaan dareemayaa inaad u baahan tahay inaad qaadatid waxyaabahaan si aad si dhab ah u fahamtid dhammaan faa'iidadooda.
Sigaarka sida daroogada awoodda leh ee kor u kaca awoodda maskaxeed iyo jidheed ee nolol maalmeedka. Waxaan jeclaan lahaa in aanad ku kalsoonayn Phenylpiracetam weligeed iyo in saameynta iyo qiyaasta si fiican loo soo koobay.
Waxaan ku cusubahay nootropics, iyo maqaalkani dhab ahaantii wuu caawiyaa. Saaxiibadayadu waxay ka hadlaan iyaga, waxaanan rabaa inaan arko iskuna dayayo waxa kashaqeyntu ay dhamaanteed tahay.
Haa, waxaan kugula talin karnaa daroogada iibka ah ee ugu wanaagsan iibka J147.
Maqaalkani wuxuu ku qoran yahay sida in xitaa bartayaasha ku saabsan daroogada caqliga ah si sahlan loo fahmi karo.Igaagana waan kugula talin doonaa dadka qaba naafonimada maskaxda.
Waa nambar cad oo loogu talagalay dadka rumaysan Nootropics. Laakiin t waa inaan loo qaadin si aan kala sooc lahayn, waxaan rumaysanahay in la-talinta la kala-soocayo.
Waxaan daawaday xad lahayn oo aan laheyn shucuur (sida J147) suuqa maanta waa mid aan la rumaysan karin. Si kastaba ha noqotee, daroogooyinka oo dhan waxay leeyihiin saameyn sideed ah taasna waa hal dhibic muhiim ah midka waa inuu tixgeliyaa ka hor intaan la iibsan.
Kabtan U09 / 20 / 2018 at 10: 23 pm
Tani miyuu u yahay mid aan amaan u ahayn cayaartoyda? Maxaan ubaahanahay inaan sugo haddii aan rabo inaan tijaabiyo Phenylpiracetam? Xagga sare ee miisaanku kama gooyo.
Machine09 / 20 / 2018 at 9: 34 pm
Waa maxay magacyada kuwan oo kale? Haa, haddii ay ku jirto shaybaarka waxaad awood u yeelan kartaa inaad ahaato mid cilmi ah. Si kastaba ha ahaatee, halkan waa wax ku saabsan Nootropics, haddii tani ka timaado shelf ma aha qof kasta ogaan doonaa.
Waa wax la yaab leh dhamaan sifooyinka Nololotikada iyo xoojinta jirka oo dhan. Waxaan la yaabanahay haddii ay jiraan daroogooyin kale oo akhbaar ah oo suuqa ku jira inkastoo ay saameyn deg deg ah. Thanks for sharing.
Waxaan helay asal ahaan Phenylpiracetam ee Ruushka gaar ahaan xiiso leh. Dhakhaatiirtu waa inay si toos ah ugu digaan dadka bukaanka ku saabsan dhibaatooyinka muddada dheer iyo qiyaasaha amaanka ah. Thanks for sharing!
Auk09 / 20 / 2018 at 6: 22 am
Kani waa faahfaahin faahfaahsan oo loogu talagalay daroogooyinka khibrada leh. Waxaan hubaa in ku dhawaad ​​qof kasta oo akhriya tani ay rabto in uu isticmaalo daroogooyinkaas.
Nootropics waa daroogo cusub oo loogu talagalay dad badan oo aan rumaysanahay, sababtoo ah waxaan kaliya u diri karaa xiriirkaa qaar ka mid ah asxaabteyda oo ay aad u cusbooneysiiso iyaga oo doonaya in ay la tashadaan dhakhtar ku saabsan.
Waxaan u maleynayay in nootropics ay tahay kaliya xasuusinta xasuusta ??? Ma aanan ogeyn inay saameyn ku yeelanayaan dheef-shiid kiimikaad ah. Xiiso leh.
Aan rumeynin sheegashooyinka ku saabsan buug-cilmiyeedka ilaa maqaalkani. Waxaan u maleynayaa inay leeyihiin waxoogaa mudnaan ah iyaga, taasina waa sababta aan hadda uga fekerayo tijaabinta nootropics.
Walaashaydu waxay badanaa iibsataa buotopics-ka (sida J147) mid ka mid ah dukaamada caafimaad ee aadka loo yaqaano halkan. Waa inaan soo sheegaa xeerka 3 ee toddobaadkii halkan ku qoran sida ay u qaadatay iyaga oo aan lahayn aqoonta caafimaadka!
ku faraxsan09 / 20 / 2018 at 2: 58 am
Xasuus la'aanta maaha waxa aan ku qasban nahay inaan u maleyno inay had iyo jeer fiican tahay sii wadida kicinta iyo kor u qaadida unugyada maskaxda ee waxtarka.
Waxay ku fiicnaan doontaa mar walba kor u qaadida awooda maskaxeed iyo daawooyinkan cilmiga leh (J147) ayaa midba midka kale ku caawin doona. Waa fiican tahay in ay ku jiraan liistada doping.
Tani waxay noqon doontaa daroogo aan loo qaadan karin si aan rasmi ahayn. Tani ma aha shamiin maqaallada ayaa sheegay in aad u fiican oo ku saabsan sida loo qaato Phenylpiracetam. Waa maxay wax fiican. Daacadnimadu marwalba waa wax fiican in la arko.
Kurt09 / 19 / 2018 at 9: 56 pm
Waxay i xasuusineysaa filimka 'Brad Cooper' oo aan lahayn daroogo leh saameyn isku mid ah sida daroogada akhristaha ah ee Phenylpiracetam; Modafinil; Armodafinil; Noopept; Sunifiram; Bromantane. Waxaan rajeynayaa in arrintani aan lagu xadgudbi karin.
sheyga09 / 19 / 2018 at 7: 23 pm
Macluumaad weyn oo loogu talagalay kuwa runtii doonaya inay kordhiyaan aqoontooda ku saabsan Nootropics (sida J147) .it run ahaantii waxay caawinaysaa maskaxda.
Daawooyinka khatarta ah (sida Modafinil, Noopept) oo aan rabin inay mid noqdaan.Laakiin waxaan ku fekerayaa cod dheer. Tani waxay hoos u dhacday iyada oo aan la tashan khubarada. Waxaan rajeynayaa inay tahay in dhakhtar soo qoro.
Phenylpiracetam waxay u egtahay sida ay leedahay awoodaha waxtarka maskaxda iyo jirka. Kalluunka J147 sidoo kale wuxuu udub dhexaad u yahay awooddaada maskaxeed adiga oo aan kuu ogolaanin inaad lumiso fartaada. Thanks for sharing!
Waxay u egtahay habab wax ku ool leh oo leh faahfaahin faahfaahsan oo ku saabsan saameyntooda isticmaalka Phenylpiracetam. Thanks for sharing!
Waxaan u mahadcelinayaa sida buuggani uu u isticmaalo daroogada akhristaha (Nootropics). Waxaan si buuxda u cusbooneysiinayaa, sidaas darteed waxaan raadinayaa maqaalado badan oo ku saabsan. Tani waxay si dhab ah u caawineysaa!
Anigu si aad ah uguma lihin qotomada Nootropics, laakiin waxaan ka fekerayaa inaan dhakhtarkeyga weydiiyo iyo haddii jirkeyga si fiican u aqbalo daawada Phenylpiracetam. Tani waxay igu cusub yihiin aniga oo u adeega maan-dooriyaha Smart, sidaa daraadeed waxaan hubaa in aan si qoto dheer u qariyo oo aan fahmo daroogada cusub.
Nootropics (Daroogada Smart) waa kuwa ugu fiican. Ma aha oo kaliya inay caawiyaan xoojinta hawlaha maskaxda, waxay sidoo kale ka caawiyaan miisaan lumis. Waxaan qaadanayaa Modafinil for 5 sanado hadda iyo faa'iidooyinka dhab ahaantii waa iska cadahay.
Phenylpiracetam waxay iga caawisay inaan culeyska weyni dhinto. Laakiin waa run, dhab ahaantii waa inaad si sax ah u qaadataa oo habboon. Haddii kale waxaadan ku farxi doonin waxtarkeeda.
Kuwa leh xasuusta xusuusta waa inay isku dayaan inay iibsadaan Phenylpiracetam tan iyo markii ay kicineyso waxay caawineysaa in kor loo qaado awoodda xusuusta. Waxay noqon doontaa mid wanaagsan ee waayeelka aan aaminsanahay.
Waxaan rajeynayaa in dadka isticmaala daawada Phenylpiracetam (Carphedon) ay xasuusnaan doonto in ay tixgeliso qiyaasta lagu taliyey in ay ka fogaato xadgudubkaas. Waxaan aaminsanahay in ay sii socoto qiyaasta saxda ah waxay keeni doontaa saameynta ugu sareysa.
Dhamaan buundo-darrada (Maqaladda Smart) waxay caawimaan arimaha xusuusta.
Haa, Phenylpiracetam waa mid aad u caan ah oo kulul suuqa iibka hadda.
Haa, waan kugula talin karaa:
Waxay yihiin dhammaanba alaabooyinka iibinta ugu fiican! ^ _ ^
Runtii, runtii waxaan helay macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan daroogada caqliga ah ee Phenylpiracetam. Waxaan ku dhawaadahay marar dhif ah isticmaalida dhamaan noocyada mukhaadaraadka suuqa, waxaan jecelahay in aan isticmaalo habab dhaqameed / dabiici ah inkastoo habka bogsashada u muuqdaan inay hoos u dhacayaan.
Waxa fiican ee qoraagu qaatay wakhti si uu u dhigo jihooyinka waxaan ula jeedaa qiyaasta Phenylpiracetam iyo dhamaanba waan jeclahay tan tan aan waxba ka aqoon tan. Si kastaba ha noqotee, ka garsoore sifooyinkaan waxaan u baahanahay dhakhtar qoraaya inta aanan helin.
Iyadoo lagu saleynayo sharaxaadda, anigu ma caawin karo laakiin ogaysiin in Phenylpiracetam (Phenotropil) waa daroogada ilbiriinka ah ee laga soo qaatay Piracetam halkaasoo kaliya wax ka beddeliddu ay tahay in lagu daro koox dabeecad oo qaab dhismeedka ah.
Xuubka Phenylpiracetam iyo budada ayaa u muuqda inay saameyn weyn ku yeeshaan heerkulka iyo garashada. Waxaan jecelahay in ay si dhaqso ah u laadiyaan oo ay u kordho niyadjabka iyo jiritaanka jirka oo dhan hal mar.
Aad ayey u weyn tahay Noocotopics (Phenylpiracetam) waxay saameyn ku yeelataa maskaxdaada iyo waxqabadka jirka ee guud. Anigu waxaan jecelahay in ay jiraan qiyaaso la hagayo nooc kasta oo jirka ah iyo sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan sida ay u shaqeeyaan. Thanks for sharing!
Waa runtii warqad fiican. Waxaan ka helay walxo badan oo ku saabsan boodhka miisaanka miisaanka online intaan laakin waxay u muuqataa inaan dhameystirneyn.
Anigu runtii ma aamini karo Mukhaadaraadka Smart inta badan maadaama aan si dhif ah u qaato. Waxaan u maleynayaa in la qaato Mukhaadaraadka Smart inaan dhab ahaantii nolosha dadka si fiican u dhicin. Ma ka soo horjeedo daraasaddan, waxaan rabay inaan dadku ogaado haddii ay doonayaan inay caafimaad yeeshaan waxay bilaabi karaan habka dabiiciga ah.
Waan ka xumahay. Hase yeeshe, dhab ahaantii waan u isticmaali karaa daawooyinkan, iyaga oo ogaanaya sida ay u ciyaari karto kaalinta difaaca jirka, gaar ahaan dabeecadda shaqadayda iyo tixgelinta da'yarkayga, way sii adkaanaysaa in la sii wado. Mowjadahan miisaanka miisaanka ayaa noqon doona fikrad fiican aniga iyo waxaa laga yaabaa inaan ka dib iibsado sibutramine ka dib.
Sidaas awgeed waa tan waxa loo yaqaan - Nootropics. Dadka "caqli-gal" ah waxay isu keenaan buxinfotiin si ay u hormaraan.
Miyuu jiraa Nootropics (Daroogada Smart) oo ka caawiya dhibaatada caqliga leh?
barakeeyey09 / 18 / 2018 at 8: 30 am
Waxaan u maleynayaa in dadku ay ku soo boodaan feker ba'an ay tahay in ay tijaabiyaan Phenylpiracetam macluumaadka ku saabsan dib-u-eegidgan waxaan qirayaa in ay noqon doonto mid waxtar leh waxaanan tijaabin karaa waxqabadka jirka.
jeclahay09 / 18 / 2018 at 8: 24 am
Tani waxay igu cusub tahay, waxaan kaliya ka bartay Necotropics (Smart Drugs) .Waxaan wax badan ka akhrisan doonaa budada Phenylpiracetam waxaan jeclaan lahaa inay saameyn ku yeelato jidhka. Waxay ku farxi doontaa inay dareemeyso saameynta marka daawooyinka la xidho.
Tani waa wax walba oo igu cusub. Xaqiiqdii ma aanan arkin nooc kasta oo arin ah sida aan u ahay qof la ixtiraamo walaaca, iwm. (Waxaan run ahaantii hubiyaa inaanan ku noolayn waxyaabo badan oo xun oo badan oo aan hubiyo inaan cuno dheellitir cuntada iyo haysashada hab nololeed caafimaad qabta), haa, sameynta noocyo daroogo ah oo i cabsiiyo (haddii aanan xanuunsanahay oo aan u baahanahay inaan daawo u qaato). Waxaan rabaa in aan ogaado sida aan loo wada-hadal lahayn aotropics-ka oo dhan ka hor inta aanad ku dhicin wax kale haddii aan xitaa waajahayo. Si kastaba ha ahaatee, fiirinta maqaalkani wuxuu u muuqdaa mid aan fiicnayn.
Dhamaan bukaanku ma aha mid u wanaagsan caafimaadkaaga guud. Qaar ka mid ah daawooyinkooda ayaa lagu qoraa liiska doping iyo ma ahan kuwa u wanaagsan cayaaraha.
Jerry09 / 17 / 2018 at 11: 27 pm
Waxaan jeclaan doonaa inaan ku tijaabiyo budada Phenylpiracetam ee garashada iyo dareenka niyadda. Maalin maalmaha ka mid ah ayaan isbedelayaa, runtii marmarka qaarkood waxay saameysaa sababtayda. Waan hubaa inay dhab ahaantii caawin doonto.
Enyi09 / 17 / 2018 at 11: 19 pm
Mid ka mid ah Dhakhaatiirta, waxay noqonaysaa mid aad u sahlan oo hadda in la ogaado dhammaan faahfaahinta ku saabsan Nootropics ee ugu fiican ee suuqa. Waxaa ugu fiican in la baro walxaha daroogada ee kasta si loo helo ugu wanaagsanaanta jirka kasta.
7 Best Nootropics (Daroogada Smart) ee suuqa ee Armodafinil Su'aalaha 8 si aad is-weydiiso ka hor intaadan qaadan budada Cetilistat
Rocuronium Bromide budada ah